बाबुराम भट्टराई र प्रदीप ज्ञवालीले उठाएको गम्भीर प्रश्नमा प्रचण्ड र शेरबहादुर चुप
काठमाडौं–एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवामाथि भारतीय नेतासँग भएको कुराकानीका विषयमा गम्भिर प्रश्न उठाइएपनि दुवै नेताले यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । नयाँ शक्ति अभियानका संयोजक डा.बाबुराम भट्टराई र एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले प्रश्न उठाएपनि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धय प्रचण्ड र देउवा मौन बस्दै आए..
अभिनेता दयाहाङ राईको ‘डेब्यु’ सिनेमा ‘अनागरिक’बाट निर्देशन थालेका रामबाबु गुरूङले लामो समय..
गरिबकी छोरी : १४ वर्षमा पाँच किलो तौल, १८ इन्च उचाइ, उपचारका लागि ह्विलचियरमा बसेर हात थाप्छिन्
‘थ्यांक्यु अंकल, थ्यांक्यु आन्टी,’ एउटा प्यारो आवाजले तान्छ । मनकारी मानिसहरू आफ्नो अवस्था..
विश्व शिखरको फेदीबाट (यात्रा/फोटोफिचर)
काठमाडौं – उजोल राई फोटोग्राफी र जोखिमपूर्ण यात्रामा रुचि राख्छन् । उनी हालै सगरमाथाको फेद..
बहस : ‘आत्मसमर्पण’तिर ओली–प्रचण्डको ‘राष्ट्रवाद’ !
काठमाडौं – गत असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएको उपलक्ष्यमा कांग्रेस, एमाले र एकीकृत माओवाद..
०३२ सालमा लोकसेवा पास गरेपछि म सूचना विभागमा नियुक्त भएँ । नारायणगोपालसँगको संगत त्यसैबेलादेखि सुरू भएको हो । सूचनाविभाग बागबजारको जामे मस्जिदनजिकै थियो । नारायणगोपाल सांस्कृतिक संस्थानमा थिए । उनी रानीपोखरीपारि म वारी । सूचना विभाग गएको केही महिनामा एक दिन नारायणगोपाल सुसेल्दै–सुसेल्दै मेरो कार्यालय आउनुभएछ । एक कर्मचारीले हस्य..
नारायणगोपालकी जीवनसाथीको नाताले उहाँलाई कसरी सघाउनुहुन्थ्यो ? कुनै पनि साधकलाई आफू अघि बढ्न साधन र साध्यमात्र भएर पुग्दैन, प्रोत्साहन, हौसला र प्रेरणा पनि चाहिन्छ । स्वर–संगीतको उहाँ साधक हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले उहाँलाई अविरल लागिरहन मैले प्रेरणामात्रै दिन सकेँ । तपाईंहरूको पहिलो भेट कहाँ र कहिले भएको थियो ? लोकप्रिय गायकलाई पाउँ..
अहिले तराई मधेसमा आन्दोलनका नाममा जे गतिविधि भइरहेका छन्, त्यसको निहुँ बनाएर भारत सरकारले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाइरहेको छ । भारत सरकारले भन्न त ‘तराई मधेसको परिस्थिति असामान्य भएकाले हामीले आपूर्ति गर्न सकेनौँ’ भनेको छ । मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दी एकअर्कासँग सम्बन्धित पनि देखिन्छ । भारतले मधेसी मोर्चा र मधेस आन्दोलनलाई ढाल बनाउने ..
रंगकर्मी सिर्जना सुब्बासँग मंसिर विशेष : श्रीमान्भन्दा पहिले बच्चाको कल्पना आउँछ
मंसिरलाई विवाहको महिना मान्ने मानसिकता सम्पूर्ण नेपाली समाजमा छ । तर लिम्बूकोे जातिगत संस्कारमा त विवाह नहुने महिना हुँदैन । कार्तिक वा चैतमा पनि हुन्छ । लिम्बू समाजमा छोरी भएको परिवारलाई सम्मानित हुन्छ । छोरी हुर्किए पनि परिवारले केटाको खोजी गर्ने र कुरा चलाउने गर्दैन । त्यसो गर्नु लज्जाको बिषय मानिन्छ । दाइजोको पनि परिकल्पना [..
राज्यकोषको सुविधा पाउने पहुँचवालाले मात्रै हो, किन पाउँदैनन् यिनले उपचार ?
काठमाडौं – पहुँचवालाले राज्यकोषबाट आर्थिक सहायता लिएको वा पाएको नौलो होइन । पछिल्लो समय पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले औषधोपचारमा राज्यकोषबाट ठूलो रकम पाएपछि जनस्तरमा यसबारे विभिन्न टीका–टिप्पणी हुन थाले । चोक, चौतारी, चियापसल, सार्वजनिक सवारीमा विरोधका स्वर पनि सुनिन थाले, ‘हो, यो दे..
एमाओवादीका नजरमा कस्ता पार्टी हुन् कांग्रेस, एमाले र राप्रपा ?
काठमाडौं – एकीकृत माओवादीले नयाँ संविधानपछि विभिन्न राजनीति शक्तिहरुको चरित्र र प्रवृतिवारे आफ्नो मुल्याङ्कन बाहिर ल्याएको छ । मंगलवारबाट शुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय समिति वैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा पार्टीहरुवारे ब्याख्या गरिएको छ । ‘माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको रक्षा, प्रयोग र विकासका चुनौतीहरूको सा..
विरगञ्ज – मधेस आन्दोलन सुरू भएपछि पर्साको सिर्सियास्थित नेपालको एकमात्र सुख्खा बन्दरगाह करिव एक महिना बन्द भयो । भारतलगायत अन्य तेस्रो मुलुकबाट कलकत्ता बन्दरगाह हुँदै रेलमार्फत आउने सामान भण्डारण गरिने उक्त बन्दरगाह अहिले भने सुचारू छ । बन्दरगाह सञ्चालनमा रहे पनि तराई बन्दका कारण रेलबाट रासायनिक मल, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, बिउविज..
न्यायको खोजीमा भौंतारिइरहेकी एक महिलाको देशकै पहिलो महिला राष्ट्रपतिलाई पत्र : के नेपालमा अब सत्यको हार हुन थालेको हो ?
सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, पाँच बर्षदेखि न्यायको खोजीमा भौंतारिइरहेकी महिलाको नमस्कार । मेरो घर तेह्रथुम जिल्लाको मोराहाङ–५ र माइती झापा हो । म राजनीतिक पृष्ठभूमि भएकी महिला हुँ । पञ्चायतकालीन समयमा म झापा जिल्लामा विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय थिएँ । पञ्चायतविरोधी राजनीतिमा होमिएर मैले भूमिगत जीवन पनि भोगें । त्यसै आधारमा प्रजातन्..
वीरगन्ज –‘के, फोटो लिएको ? हामीले खानु पर्दैन ? दुनियाँले बेचेको छ, अरुको लिनु, हाम्रो नलिनु ! हामीले क्यामरा झिकेपछि एक महिला चर्को स्वरमा कराउन थालिन् । नजिकै रहेको अर्का दुई युवा मध्ये एउटाले भने, ‘यस्को फोटो लिनुस, यहि हो तेल तस्कर !’ ‘म हैन, यो हो तेल तस्कर !’ सुन्दा सामान्य तर निकै गम्भिर […]
काठमाडौं – तराई मधेशमा जारी आन्दोलन र नाकाबन्दीले देशभर इन्धनको चरम अभाव छ । यसको असर पहाडमा मात्रै नभएर तराईमा पनि उत्तिकै व्याप्त छ । भारतीय नाका बन्द गरेर मधेसी नेता तथा कार्यकर्ता आन्दोलनमा छन् भने जनता भने चुलो बल्न छोडेपछि इन्धनका लागि दाउरा लिन जंगल पस्न थालेका छन् । जंगलै जंगलले ढाकिएको तराई र […]
सर्लाही – रामेछापको बेथानबाट चार दशकअघि सर्लाहीको कर्मैया आएर बस्न थालेका राम पाण्डे तराई–मधेसको लामो आन्दोलनबाट दिक्क भइसकेका छन् । कर्मैया क्षेत्रमा पहाडी समुदायको बाहुल्य भएकाले विद्यालय र बजार खुलेका छन्, तर राजमार्ग ठप्प छ । खेतीपाती गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका पाण्डे तराई आन्दोलनका हरेक घटनाबारे अपडेट छन् । केही दिनअघि कर..
काठमाडौं – गत मंसिर ११ गते काठमाडौंको चक्रपथमा २७ किलोमिटर लामो मानव साङ्ग्लो बनाएर बन्द, हड्ताल तथा सीमा अवरोधको विरोध गरेपछि त्यसको प्रतिक्रिया स्वरुप सोमबार वीरगंजमा विद्यार्थीहरुले आन्दोलनको समर्थनमा मानव साङ्ग्लो बनाएका छन् । बोर्डिङ संचालकले विद्यार्थीलाई सडकमा उतारे, २७ किलोमिटर चक्रपथमा बनाए मानवसाङ्लो विद्यार्थीहरुले वी..
सर्लाही– सरकार र मधेशी मोर्चा राजमार्गमा केन्द्रीत भएपछि तराई–मधेशमा हिंसाको खतरा बढदै गएको छ । राजमार्ग बन्द गराउने मोर्चाको योजना असफल पार्न सरकारले विशेष सुरक्षा योजना लागु गरेको छ भने चुरेभावर पार्टीले पनि ठाउँ–ठाउँमा प्रतिकारको नीति लिएको छ । यस्तै बेला सरकार र चुरेभावरको योजना सफल पार्न मोर्चाले ‘काउन्टर रणनीति’ तयार गर्दै..
गायिका इन्दिरा जोशीसँग मंसिर विशेष : मलाई माग्नै आएनन्
गायिका इन्दिरा जोशी केही बर्षदेखि भन्दै आएकी थिइन्, ‘प्रेममा पर्ने समय नै पाएकी छैन ।’ तर भोगाइ र अध्ययनले उनलाई लागेको छ, ‘विवाह उमेरमै गर्नुपर्छ । जैविक रूपमा पनि समयमै विवाह गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’ समयमै विवाह गर्ने ‘मुड’मा पुगेकी इन्दिराले ‘मंसिर विशेष’ स्तम्भमा प्रेम र विवाहबारे आफ्नो धारणा तथा योजना यसरी प्रस्तुत गरिन् : [..
सर्लाही– नवलपुरबाट मलंगवा जाने बाटोमा पर्ने हरिपुर गाविसका वैजनाथ दास ‘मिनरल वाटर’को बोत्तलमा पेट्रोल भरेर बेच्दै थिए । उनलाई मधेस आन्दोलनको सामान्य जानकारी छ । लामो समयदेखी चल्दै आएको मधेश आन्दोलनले उनको दैनिक किसान जीवनलाई प्रभावित पारेको छ । यस्तो अवस्था आउनुमा उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दोषी देखाए । भने, ‘ओलीले गोली चलाउ..
[email protected] Zero : मधेसको सडकमा आन्दोलनका अवशेषहरु (फोटोफिचर)
सर्लाही – मधेसको सडक टायर बालेर कालो छ । सिसाको टुक्राहरु सडकभरि छरिएका छन् । जता गयो उतै सडक किनारामा जलेका बस र कार भेटिन्छन् । सरकारी अधिकारीहरुको पुत्ला सडकमा टाँगिएका छन् भने विरोधका कालो झण्डा जहाँत्याही गाडिएको छ । आजकल मधेसमा देखिने दृश्य हो यो । विभिन्न नागरिक अधिकारको माग गर्दै १०७ दिनदेखि आन्दोलित […]
धनुषा – जिल्ला विकास समिति कार्यालय सप्तरीको मूल गेटमा कालो झन्डा गाडिएको छ । भर्खरै सरुवा भएर आएका एलडिओ शिशिर पौडेल हाजिर हुन सकेका छैनन् । योजना अधिकृत लगायत अन्य कर्मचारी तीन महिनादेखि हाजिर गर्न समेत गएका छैनन् । कार्यालय सहयोगी जयनारायण यादव भन्दै थिए, ‘खोल्छु, सफा गर्छु, यतै बस्छु ।’ संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्च..
धनुषा-राजमार्ग सुचारु गर्नका लागि सरकारले विशेष सुरक्षा योजना लागु गरेपछि तराई–मधेशमा थप हिंसा बढने खतरा बढेको छ । सरकारी योजना आएपछि आन्दोलनरत मधेशवादी दलका नेताहरु पनि योजना बनाउने तयारीमा जुटेका छन् । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चालगायतका संगठनहरु हाल आमहड्ताल र प्रदर्शन भन्दा पनि राजमार्ग ठप्प गर्नेमा नै केन्द्रित बनेका छ..
सिराहा– ‘दाल, तरकारीको त कुरै छाड्नोस् । नुन र भात खान नि धौ–धौ भैसक्यो, ऋण गरेर थापेको पसलको ढोका उघार्न नपाएको तिन महिना बित्यो । पसल खोल्न जाँदा पिट्न आउँछन्, अभावै अभाव छ । निकै कष्टले बाँचिरहेका छौं ।’ यसो भन्दै गर्दा सिराहा नगरपालिका–७ बस्ने मिनादेवी पासवानको आँखा रसाएको थियो ।
धनुषा– ‘यहाँबाट स्कर्टिङ सुरु हुने बेला भो, राजमार्ग क्लिअर छ ?’ इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केवरमा ड्युटी अफिसरले बोकेको सेट बज्यो । त्यसपछि ठाउँ–ठाउँका स्टेसनहरूले जवाफ फर्काउँदै गए, ‘हाम्रो एरियामा अवस्था नर्मल छ, हाम्रोमा नर्मल, हाम्रोमा पनि नर्मल… ।’ सबैतिरबाट राजमार्गमा आन्दोलनकारी नभएको खबर पाएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय..